Ikhaya » Izindaba Zamuva » Ubuchwepheshe » Ucwaningo lwesayensi e-Arctic, Isitayela saseRussia
Izindaba Zezinhlangano • Izindaba • Abantu • I-Russia Breaking News • Ukusimama Izindaba • Ubuchwepheshe
Umhlangano wezikhulu eziphezulu zokuxhumanisa ucwaningo lwesayensi e-Arctic waba eMoscow. Umhlangano ububanjwe njengengxenye yohlelo lwemicimbi emikhulu ehlotshaniswa nokuba nguSihlalo waseRussia woMkhandlu wase-Arctic ngo-2021-2023, oqhutshwa yi-Roscongress Foundation.
Lo mcimbi, oholwa nguNatalia Bocharova, iPhini likaNgqongqoshe wezeSayensi kanye neMfundo ePhakeme weRussian Federation, ubuhanjelwe ngabamele amazwe ase-Arctic (Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden, kanye ne-United States), I-Arctic Council Working Groups kanye nezinhlangano ze-Arctic Indigenous Peoples', ezingabahlanganyeli unomphela be-Arctic Council.
"USihlalo waseRussia uhlose ukuthuthukisa ukusebenza kahle kwemisebenzi yesayensi kanye nokusebenza okungokoqobo kwemiphumela yabo e-Arctic. Sihlose ukukhulisa ukusetshenziswa kwengqalasizinda yesayensi futhi sikhuthaze ukusetshenziswa kobuchwepheshe obuthuthukisiwe nezindlela ezinhle kakhulu zokuqalisa amaphrojekthi ahlanganyelwe, "kugcizelela u-Nikolai Korchunov, iNxusa elikhulu le-Arctic Cooperation eMnyangweni Wezangaphandle WaseRussia kanye noSihlalo WoMkhandlu Wase-Arctic. Izikhulu eziphezulu ze-Arctic.
Ngokusho kwakhe, enye yamapulatifomu okubambisana kwesayensi ezindaweni eziphakeme kungaba yisiteshi samazwe ngamazwe se-Arctic Snezhinka e-Yamal. Le phrojekthi, egxile ocwaningweni oluhlanganyelwe emkhakheni wamandla angenayo i-carbon, yathunyelwa yiRussia emhlanganweni weQembu Lokusebenza Lokuthuthukiswa Okuqhubekayo kwe-Arctic Council ngo-2019 futhi yasekelwa amazwe ase-Arctic.
Abahlanganyeli baxoxisane ngesidingo sokuhlonza izinto ezibalulekile ezabiwe zocwaningo lwe-Arctic, ukuqinisa ukubambisana kwesayensi ye-Arctic yamazwe ngamazwe, ukubamba imiqhudelwano ehlanganyelwe yesayensi yamaphrojekthi ocwaningo, kanye nethuba lokusungulwa kweKomidi Lokuxhumanisa le-Arctic Scientific Activities nokudala isizindalwazi socwaningo samazwe ngamazwe esivamile sase-Arctic. amazwe.
Imiphumela yengxoxo ngezinhlelo zase-Russia izokwethulwa emhlanganweni we-Arctic Council Senior Arctic Official ngoDis. 1-2 e-Salekhard.